रोम्स अनुप्रयोगको साथ तपाईको फोन दरमा प्रबन्ध गर्नुहोस् र बचत गर्नुहोस् Androidsis
रोम्स, तपाईको फोन दरमा प्रबन्ध गर्न र बचत गर्न एक अनुप्रयोग
आजका अपरेटरहरूले प्राय: जसो हामीले उनीहरूसँग सम्बन्धित सबै सेवाहरू ब्यवस्थापनको लागि आफ्नै अनुप्रयोगहरू प्रस्ताव गर्दछौं, यो विभिन्न लाइनहरू, इन्टरनेट होस् वा हामीसँग ट्राईफोनी, डाटा र टिभी समावेश छ। यी अनुप्रयोगहरू प्राय राम्रो प्रतिक्रिया गर्दछ र प्रबन्धको लागि तपाईंलाई आवश्यक सबै कुरा हुन्छ, तर हामीसँग गुगल प्ले स्टोरबाट राम्रो चीज हामी यसलाई गर्न सक्दछौं। अधिक पूर्ण अनुप्रयोगहरू पहुँच गर्नुहोस् कि तिनीहरूले हामीलाई राम्रो जानकारी प्रस्ताव गर्दछन् र ती तुलना पनि गर्छन् तुलना गर्न को लागी कुन अपरेटर हाम्रो लागी राम्रो हुन सक्छ।
त्यस्तै एक अनुप्रयोग रोम्स हो। रोम्स हो एक स्पेनिश अनुप्रयोग पूर्ण रूपमा प्रबंधन र बचत को लागी समर्पित छ तपाईले सम्झौता गरेको दरमा। सबैभन्दा पहिले, तिनीहरूको वेबसाइटमा उनीहरूले तपाईंलाई श्रृंखला को प्रस्ताव गर्छन् युक्तिहरू तपाईंको मोबाइल डाटा खपत कम गर्न तर थप रूपमा, यो तपाईंसँग रहेको सबै मोबाइल र इन्टरनेट लाइनहरूको उत्कृष्ट प्रबन्धक हो, जबकि यसले कम्प्याटरको रूपमा ठूलो काम पनि गर्दछ जुन हामीलाई प्रस्ताव गर्दछ जुन हामीलाई सामान्य रूपमा हाम्रो फोनमा दिन्छौं प्रयोगको लागि उपयुक्त छ। यसले छूट र प्रस्तावको बारेमा जानकारी पनि प्रदान गर्दछ, व्यक्तिगत सल्लाह प्राप्त गर्न जुन हामीलाई मोबाइल दरहरूमा पैसा बचत गर्न अनुमति दिनेछ।
1 अनुप्रयोग सुरूवात गर्दै
2 रोम्सका सब भन्दा राम्रा गुणहरू
3 एक बढ्दो परियोजना
4 अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुप्रयोग सुरूवात गर्दै
रोम्स एक अनुप्रयोग हो जुन पूर्ण रूपमा पूर्ण हुन्छ जब हामी हाम्रो आफ्नै डाटाको साथ सत्र शुरू गर्दछौं हामीसँग हाम्रो अपरेटर छ। यस तरीकाले, यसले हामीले गरेको उपभोगको अध्ययन गर्दछ, भर्खरको बिलहरू नियन्त्रण गर्नेछ र तपाईंलाई आजको समयमा प्रयोग गरिएको मिनेट र मेगाबाइटको बारेमा सूचित गर्दछ। यसले एकदम पूर्ण रिपोर्टको साथ ठूलो काम गर्दछ जसले तपाईंलाई आवश्यक जानकारी दिन्छ ताकि तपाइँलाई तपाइँको मासिक भुक्तानीको स्थिति कस्तो हुन्छ भनेर सबै समयमा थाहा हुन्छ।
तपाईंको सेवाहरूको विस्तृत जानकारी प्राप्त गरेर तपाईंलाई सूचित गर्न पुश सूचनाहरू सुरू गर्नेछ कि तपाइँ फेरि बिलि cycle चक्र सुरू गर्नुभयो जब तपाइँ महिनामा पुग्नुहुन्छ, तपाइँको बसाइ अन्त्य हुनेवाला छ वा खपतको बारेमा सतर्कता हो ताकि तपाइँलाई थाहा छ कि तपाइँले कलहरू वा मेगाबाइट्सको सीमा पार गरिसक्नु भएको छ।
अनुप्रयोग पाँच ट्याबमा विभाजन गरिएको छ यसले हामीलाई हाम्रो लाइनको डाटा पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ, जहाँ तपाईं सबै जानकारी पहुँच गर्नुहुन्छ जस्तै डेटा खपत, मिनेट प्रयोग, अन्तिम चलानीको राशि वा दिनहरू जुन तपाईंले रहन प्रतिबद्धतामा छोड्नुभएको छ; तपाईंको उपभोग अनुसार उत्तम प्रस्तावहरूको चयन, जहाँ तपाईं मोबाइल दर चयन गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई बचत गर्ने, बोल्ने र ब्राउज गर्ने वा सुपर प्रयोगकर्ताद्वारा उत्तम सूट गर्दछ; अपरेटरहरू द्वारा एक कम्प्याटर, जहाँ तपाईं प्यारामिटरहरूको साथ खोजी गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंलाई चाहिएको अनुसार समायोजित; विभिन्न समाचारहरूसँग टाइमलाइन, जस्तै रोम्स ब्लगमा नै; र आफ्नै खाता, पुश सूचनाहरू कन्फिगर गर्न खाली ठाउँ र अधिक।
रोम्सका सब भन्दा राम्रा गुणहरू
Roams जोड दिन्छ सहि नियन्त्रण गर्न आवश्यक जानकारी प्रस्ताव गर्नुहोस् केहि लाइनहरू जुन तपाईंले निश्चित ग्राफहरूसँग सम्झौता गरेको छ कि चाँडै खपत डाटा वा मिनेट को प्रतिशत संकेत गर्दछ, र स्थायित्व को प्रतिबद्धता बार के हो कि चाँडै तपाईं आफ्नो अपरेटर संग बाँधिएको छोड्नुभएको समय देखाउँदछ। यी सबै धेरै स्पष्ट इन्टरफेसको साथ देखाईएको छ, जुन उत्तम प्रदर्शन गर्दछ र सबैमा उल्टाउँदैन, बरु स्पष्ट रूपमा। उत्तम गुण
तुलना अर्को शक्ति हो कि यो प्रस्ताव र तिनीहरूलाई दुई उल्लेखित ट्याबहरूमा वर्गीकृत: selection हाम्रो चयन »र operator अपरेटर द्वारा खोज»। Roams ले तपाईको केसको अध्ययन गर्ने बेला निश्चित दरहरू र अपरेटरहरूको सिफारिश गर्दछ। तपाईले उदाहरणको लागि "मोस्टर सेभर" छनौट गर्नुभयो र तपाईलाई सब भन्दा बढि बचत गर्नेहरु देखाउनुहुन्छ। तपाईंसँग अनुबन्ध मोबाइल, प्रीपेड, केवल इन्टरनेट वा विकल्पहरूको त्रिकुट्स जस्तै ईन्टरनेट + ल्याण्डलाइन + मोबाइलको लागि विकल्पहरू छन्।
तर, मेरो लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प खोजी ईन्जिन हो, किनकि तपाईं सक्नुहुन्छ अपरेटरलाई फेला पार्नुहोस् जुन तपाईंको खपतमा उत्तम सूट गर्दछ। उदाहरणको लागि, यदि तपाईंको अपरेटरसँग २०० मासिक मिनेट प्लस २ जीबी छ भने, तपाईं उही कोटा प्रस्ताव गर्ने अरूहरूको तुलना गर्न खोजी गर्नुहुन्छ। एक वा दुई मिनेटमा तपाईसँग दर्जनौं विकल्पहरूको साथ सीमित खोजी हुनेछ जुन तपाईले भाडामा लिनु भएको अपरेटरको प्रस्तावलाई सुधार गर्दछ।
यदि तपाईंसँग स्थायित्व छैन भने, यो छ एक अपरेटर खोज्न सबै भन्दा राम्रो विकल्प कि वास्तव मा आफ्नो आवश्यकताहरु सूट। र यो यो छ कि रोम्ससँग telephone० भन्दा बढी टेलिफोन अपरेटरहरू र १,००० मोबाइल र इन्टर्नेट दरहरू छन्, त्यसैले तपाईंसँग तपाईंको हातमा एक उत्तम हालको तुलनात्मकहरू हुनेछन्।
una भर्खरै अपडेट गरिएको अनुप्रयोग ट्याब गरिएको ब्राउजि with, बहुरेखा र अपरेटर द्वारा खोज र सबै सर्तहरूमा स्थिरता सुधारिएको छ। यदि तपाईं यस प्रकारको अनुप्रयोग खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भने तपाईंले शिरमा न। टक्राउनु भएको छ।
एक बढ्दो परियोजना
कम्पनीसँग छ महत्त्वपूर्ण वृद्धि दुवै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय योजनाहरु। यसको लागि तिनीहरू फाइनान्सि round राउन्डको बिचमा छन् जुन उनीहरूले एक मिलियन यूरो प्राप्त गर्ने आशा गर्दछ जुन उनीहरूलाई आफ्नो उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ।
उनीहरूलाई चिन्न तिनीहरू एक धेरै प्रभावशाली भिडियो उत्पादन गरेका छन जुन हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं। रोम्स + ब्रेकिंग खराब ... के तपाइँ उत्सुक हुनुहुन्न?
नि: शुल्क अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू » रोम्स, तपाईको फोन दरमा प्रबन्ध गर्न र बचत गर्न एक अनुप्रयोग
पेड्रो जेजे भन्यो
मसँग वेबको पुरानो संस्करण थियो र सत्य यो हो कि यो धेरै राम्रो थिएन। मैले नयाँमा अपग्रेड गरेको छु र त्यहाँ निश्चित सुधारहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ।
म मेरो अपरेटर with को साथ केहि यूरो बचत गर्छु कि भनेर हेर्न जाँदैछु
पेड्रो जेजेलाई जवाफ दिनुहोस्
जुआन एम भन्यो
के यो सुधारिएको छ? के यो डाउनलोड गर्न लायक छ? म उपभोग नियन्त्रण को मुद्दा को लागी यो गर्छु।
जुआन एमलाई जवाफ दिनुहोस्
क्रूर भिडियो, सही? हाहाहा मैले यसलाई पहिलो पटक डाउनलोड गरें र यो राम्रो छ! हेरौं कि यो महिनाको अन्त्यमा देखिन्छ कि! 😛
Tuky लाई जवाफ दिनुहोस्
येशू एम भन्यो
एक प्राथमिक यो राम्रो देखिन्छ। यदि यो भिडियोको रूपमा राम्रो छ भने यो मेरो स्मार्टफोनमा रहनेछ।
येशू एम लाई जवाफ दिनुहोस्
Go «news» ... यस जस्तो अनुप्रयोगहरू बाहिर छन्, कम्तिमा तपाईं निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि यो विज्ञापन हो किनभने यो बेशर्मी हो ...
Betisbetis लाई जवाफ दिनुहोस्
रोजारी मोतीहरू भन्यो
यसले मलाई यस अनुप्रयोगको कसरी प्रशंसा गर्छ भनेर सोच्न यसले धेरै चीज छोड्दछ। रोम्स अघि पहिले नै धेरै अनुप्रयोगहरू छन् जुन यो उद्देश्य थियो। मैले ती सबैलाई प्रयास गरें ... र सत्य यो हो कि उनीहरूसँग के छ जुन धेरैले पहिलेदेखि नै प्रस्ताव गर्दै आएका छन्। वेप्लान मेरो मनपर्ने र बिभिन्न कारणहरूको लागि हो: गति, सटीकता, सहजता, त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरूबाट मद्दत, आदि। आदि। त्यसैले मलाई कथाहरू नभन्नुहोस् ... हाहाहााहा राम्रो हप्ता सबै
ROSARIO लाई जवाफ दिनुहोस्
ब्ल्याकबेरी यस वर्ष दुई मध्य-दायरा एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू सुरूवात गर्नेछ